izinwele ezinde, okuyinto uyogqoloza amadoda - iphupho oyinhloko abesifazane abaningi. Kodwa akubona bonke izinwele enjalo unikezwa ngokwemvelo. Ngisho noma kukhona ezingaba futhi siyakwamukela ubude oyifunayo banayo sikhule eminyakeni. Kodwa manje kukhona elinye ithuba lo msebenzi oyisicefe - ephephile izinwele izandiso.
Namuhla, ubuchwepheshe obusha embonini izinwele, isiqiniseko ukuthi izandiso izinwele for izinwele iDemo kulula kakhulu ukuba ngiyibambe ubuhle salon kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izinwele enjalo bheka zemvelo kangangokuthi cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka siqu sakhe. Uma ukhathele ukuthola nezinwele "umfana" e kwamahora ambalwa wachitha ezandleni master abanamakhono, uzoba eside-onezinwele ezimhloshana Fairy inkosazana.
Izandiso izinwele nezinwele ezimfishane akuyona njalo ephephile, ngakho-ke khetha zezindlela wenze ofanele kakhulu. Uma une izinwele elincanyana, ukukhetha indlela ngawo sewunganamathisela Strand ukuba nezimpande zawo phansi. Kuzokwenza ivolumu izinwele zakho ngaphezulu kungukubonakala abalulekile. Nokho, le ndlela has nezihibe, ngokukhethekile, ukwandisa isisindo izinwele kungaholela kuphulwa yabo futhi ugeze izinwele zakho iyoba nzima kakhulu. Ubokhumbula njalo-ke ukuthi lokhu Ukwakha-up of izinwele nezinwele ezimfishane kudinga uvakashelwa njalo kuya salon izinwele ukuze babanakekele.
Jwayelana izindlela ethandwa kakhulu izinwele izandiso. Tape umthamo izinwele ukuze nezinwele ezimfishane - inqubo zobude ngaphandle ukusetshenziswa amaphilisi. Ukuze enze le test kudinga izinwele ukuthi kulotshwe ububanzi tape hhayi ngaphansi kuka 3 cm. Ukuze sinikeze izinwele ivolumu oyifunayo, kungase kuthathe bands ngu-50, kuye ngokuthi ngabe unayo ikhanda obukhulu izinwele. Uyakubuye asibekezelele, ukuza emuva enkosini yaso ngenxa yokulungiswa izinyanga ezimbili. Tape izinwele isandiso has eziningi eziwusizo. Omunye wabo liqukethe iqiniso lokuthi aphansi izinwele ethe njo nge ingcina, futhi azifani esebenzisa amaphilisi noma inhlaka. Enye inzuzo - lokhu umthamo ubanjwe akukho imizuzu isikhathi eside kunaleso 40. Ngakho ukuthi ngesikhathi sale nqubo, ungenawo uze ube naso nesikhathi usukhathele.
Pistols futhi curling kulesi sikhundla ibhande alisetshenziswa. Ukuze ususe ukhiye, wizadi isebenzisa uketshezi ekhethekile ehlukanisa tape ngaphandle kwezinkinga, ngaphandle ekubhubhiseni. Abakwazi ukunamathiselwa tape ekhethekile futhi ukwakha futhi. Ngesikhathi esifanayo, kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani izikhathi wena ayilungiswanga izinwele, ubude bazo ayishintshi, ngoba ithephu elingeke linqunywe, ushintsha kuphela ingcina phezu kwabo. Uma ukukhipha izingidi we donor, izinwele zakho ngeke yimuphi amathrekhi ezingadingekile. Le nqubo ibizwa umhlabeleli ezisetshenziselwa izandiso zesikhathi esifishane, isibonelo, uma une ukuya yimuphi umcimbi omkhulu. Le ndlela kuyinto elula ngoba ikuvumela ukwakha izinwele zakho futhi bawasuse nganoma yisiphi isikhathi.
Tressovoe izinwele izandiso - kungcono okunye okukhulu nezinye izindlela amandla, okuyinto akuniki kuphela shock izinwele obuphelele ngaphezulu, kodwa futhi ivolumu. Le nqubo uthola igama layo kusukela elithi "Tress", ngokwezwi nezwi elisho ukuthi isiqeshana emincane izinwele stackable. Master kwenza filigree ukwelukwa umbala elibukeka cishe like a pigtail, futhi umuntu othungela ngendlela ekhethekile izinwele Tresse. Imigqa izinwele ukufihla ngemuva bebodwa, ukuze izinwele ubukeka zemvelo kakhulu.
Imoto Professional, livamile. Uyini umehluko?
Dye "Garnier (Alder)": izinzuzo e ukusetshenziswa
Ukubona Chichikov: esakhula Pavel Ivanovich
Izidakamizwa "Negrustin": Ukubuyekezwa kwe abathengi kanye odokotela, ukubunjwa, indlela isicelo
Umlotha waseShayina: incazelo, izindawo zokwelapha
Sikhathi esimangalisayo lapho apula izihlahla bukhule